टी-ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खला इंग्ल्याण्डले जित्यो
२२ भदौ, एजेन्सी । अष्ट्रेलियासँगको तीन खेलको ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खला इंग्ल्याण्डले जितेको छ । गएराति भएको दोस्रो खेल ६ विकेटले जितेसँगै इंग्ल्याण्डले एक खेल अगावै श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको हो ।
साउथह्याम्टनमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले २० ओभरमा ७ विकेट बनाएर एक सय ५७ रन बनायो । खराब शुरुवात गरेको अष्ट्रेलियाका लागि आरोन फिन्चले ४० र मार्कुस स्टोनिसले ३५ रनको योगदान दिए ।
१ सय ५८ रनको मध्यम लक्ष्य इंग्ल्याण्डले ४ विकेट गुमाएर १८ ओभर ५ बलमा भेट्टायो । इंग्ल्याण्डलाई जिताउन जोस बटलरले नटआउट ७७ रनको योगदान दिए । १८ ओभरको ५ औँ बलमा बटलरले छक्का हान्दै टिमलाई सिरिज जिताएका थिए ।
पहिलो खेलमा रोमाञ्चक दुई रनको जित निकालेको विश्वविजेता इंग्ल्याण्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा पनि बलियो देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, भदौ २२, २०७७, ०८:११:२९
सन्दीपको बलिङ बरियता किन खस्कियो ?
अनुष्का गर्भवती, बाबु बन्दै विराट कोहली
च्याम्पियन्स लिगमा पीएसजी र बार्यनको भीडन्त
यस बर्षको सीपीएलमा सन्दीपको पहिलो विकेट
च्याम्पियन्स लिग कसरी जित्ला रियलले ?
शनिवार, श्रावण १७, २०७७ ग्लोबल कर्णाली
म्यान्चेष्टर सिटीविरुद्ध दुइ एक गोलले पछि परेको रियल मड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिग जित्न साच्चै कठिन छ । रियलको मैदानमा उसैलाई हराएको सिटी अब आफ्नो मैदानमा रक्षात्मक खेल्ने अवस्थामा छ । तर यो रियलका प्रशिक्षक जिदानका लागि चुनौति मात्रै होइन, जीवनकै कठिन खेल जस्तै छ । पुरा पढ्नुहोस्
भारतका लागि एसिया कप क्रिकेट रद्द
गांगुलीले प्रतियोगिता रद्द हुने बताएपनि एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले केहि बताएको छैन । कोरोनाको महामारी कायम रहेपछि प्रतियोगिता अन्योलमा रहेको छ । यस्तै पाकिस्तानमा आयोजना भए भारतले नखेल्ने बताएको छ । पुरा पढ्नुहोस्